လမင်းခင်: February 2009
ILOမှ အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှုး နှင့်စစ်အုပ်စု ၏ ၂၀၀၉ ဖေဖေါ်ဝါရီစာချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ILO မှအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး KariTapiola (ကာရီတာပီရိုးလာ)
နှင့်မြန်မာစစ်အုပ်စု၂၆-၂-၂၀၀၉ မှာ နောက်တစ်နှစ်စာအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(သဘောတူစာချုပ်) ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ် ။။အဓိက က တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အဓမ္မလုပ်အားပေး
စေခိုင်းမှုပပျောက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ ၂၆-၂-၂၀၀၆ မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ သဘောတူညီမှု
ကိုဆက်လက် (တစ်နှစ်တိုး) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သဘောတူလက်မှတ်
စစ်အုပ်စုရဲ့ အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီး နှင့် ဒုတိယ အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးတို့ ကိုတွေ့ ဆုံပြီးပါပြီ ။။
မြန်မာပြည်က ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ မွမ်းကြပ်နေလှတဲ့အလုပ်သမားထုအတွက် ILO ဟာ ကြီးမားတဲ့
အင်အားဆိုတာ မြန်မာအလုပ်သမားထု သိထားဖို့ သိတ်လိုအပ်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာအဓမ္မလုပ်
အားပေးနေရစဉ်သော်လည်းကောင်း အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမည်ဟု သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့ 
ကညွန်ကြားစဉ်သော်လည်းကောင်း ILO ရန်ကုန်ရုံးချုပ်ကိုတိုင်ကြားနိုင်ရင် လက်ပူးလက်ကြပ် ပို
လို့ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိမှာပါ။ရန်ကုန်ရုံး(ILO ) တာဝန်ခံ စတီး(ဗ်)မာရှယ်မှလည်း
လုပ်အားပေးပြီးမှမဟုတ်ပဲ အချိန်မှီလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်ကြားနိုင်ဖို့ ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။။
အဓမ္မလုပ်အားပေး ခံရမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်ကြားခွင့်၇ှိတယ် တိုင်ကြားတဲ့သူ
တွေကို စစ်အုပ်စုက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါဘူး လို့ILO ကို ဂတိက၀တ် ပေးထားပါတယ်
ဒါ့ကြောင့်ကျမတို့ အလုပ်သမားထု ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့ ။။စစ်အုပ်စုဟာရန်ကုန်ရုံး
နဲ့ဝေးတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း ချင်းပြည်နယ် နဲ့ ယခု လက်ရှိ
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့တဲ့ဧရာဝတီတိုင်းတို့ မှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုတွေ၇ှိနေဆဲပါပဲ ။။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လက်လှမ်းမမှီလို့ မတိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ပြည့်သူ့ လုပ်အားစွမ်းအားတွေကို အမြတ်
ထုတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ ပို၍ပင်အားရသဘောကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခံရတဲ့
ဒေသမှပြည်သူများမှ မဖြစ်မနေတိုင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် လုပ်အားပေးနေရတဲ့အချိန်တွင်း
မှာပဲ ILO သို့ကြေးနန်းဖြင့်သော် လည်းကောင်းဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းအကြောင်းကြားနိုင်
ရင် ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံ စတီးမာ၇ှယ်တို့ က အချိန်မှီ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း
တွေ၇ှိနေတာကြောင့် လုပ်သားပြည်သူများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် (ILO)
နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်၇ွက်ကြစေလိုပါတယ် ။။ထိုမှသာ စစ်အုပ်စု ထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့ လုပ်အားပေး
စေခိုင်းမှုတွေပပျောက်မှာဖြစ်ပါတယ် ။။ကလေးစစ်သား နှင့်ပတ်သတ်၍လည်း ၁၈နှစ်အောက်
ကလေးစစ်သားများ၇ှိသည်ကိုမိသားစုများမှအကြောင်းကြားကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။။ ကလေးစစ်
သား များကို နယ်မြို့ များအပြင် ရန်ကုန် ဒညင်းကုန်း မင်္ဂလာဒုံ ထောက်ကြံ့ လမ်းမ တွေမှာ ပိုး
စိုးပက်စက် လိုက်လံခြိမ်းခြောက်ဖျားယောင်းစုဆောင်းနေတဲ့ တပ်သားတွေကိုပြည်သူတွေတွေ့
နေရမှာပါ။တွေ့ တာနဲ့ILO သို့ အချိန်မှီအကြောင်းကြားကြရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။။
အထူးသဖြင့် အဓမ္မစေခိုင်းမှု ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကို သိရကြားရရင် ILO ရုံးကိုသာ
အချိန်မှီအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ် သတင်းမီဓီယာများတွင် လွှင့်ထုတ်ပြီးပေါက်ကြားသွားပြီ
ဆိုလျှင် စစ်အုပ်စုမှအချိန်မှီ အပြောင်းအလဲများ လိမ်လည်မှုများပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံ
တွင်း၌ပင် စောင့်ေ၇ှာက်လျှက်ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်ကြီး (ILO)
နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်လေးစားစွာ တိုက်တွန်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။။
မှတ်ချက် ။။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီ့လိုအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုတွေကိုထင်သာမြင်သာ
လာအောင် တိုင်ကြားရဲ တိုင်ကြားတက်လာအောင် စစ်အုပ်စုကိုအရေးယူနိုင်အောင်
ဦးစွာမီးမောင်းထိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်
FTUB ကပဲဖြစ်ပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 11:05 AM0comments Links to this post
စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ခံရထားသည့် ဇင်ဘာဘွေ ဒုသမ္မတကိုယ်ပိုင် ရွှေတန်ချိန် ၄ တန်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ နဲ့ ရောင်းဖို့ကြိုးစား NEJ /၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
နိုင်ငံတကာ ဒဏ်ခတ်ခံထားရသည့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၏ အမျိုးသမီး ဒု-သမ္မတတဦးက သူပိုင်သည့် ရွှေတန်ချိန် (၄) တန်နှင့် စိန်များ ချရောင်းဖို့အတွက် ဥရောပ ရတနာကုမ္ပဏီတခုသို့ ပွဲစားဖြင့် လျှို့ဝှက် ဈေးဆိုင်ခဲ့သော်လည်း ရောင်းသူအမည် ပေါက်ကြားသွားသည့်အတွက် အရောင်းအ၀ယ် ပျက်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းကို လန်ဒန်မြို့ထုတ် တိုင်းသတင်းစာကြီးနှင့် ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတို့မှ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Firstar Europe Ltd ၏ ပြောကြားချက်အရ ဇင်ဘာဘွေ ဒု-သမ္မတ မစ္စဂျွိုက်စ်မူဂျုးရူးက သူပိုင် ရွှေ (၄) တန်ကို ဒေါ်လာ သန်း (၉၀) နှင့် ရောင်းမည့်အကြောင်း သမီးနှင့် သားမက်ကို ပွဲစားလုပ်ပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ လက်ရှိရွှေဈေးမှာ ရွှေတကီလိုကို ကန်ဒေါ်လာ (၃၀,၇၀၀) ပေါက်သည်။
မစ္စဂျွိုက်စ်မူဂျုးရူးကို ဒု-သမ္မတအဖြစ် ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ အာဏာရှင်ရော ဘတ်မူဂါဘေးက လွန်ခဲ့သည့် (၅) နှစ်ကထဲက ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒု-သမ္မတ မစ္စဂျွိုက်စ်မူဂျုးရူးသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို သေးသိမ်အောင်လုပ်သည့် ဇင်ဘာဘွေ ထိပ်တန်းအရာရှိ (၂၀၀)ကျော် ထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အမေရိကန်နှင့် အီးယူမှ (၂၀၀၂) ခုကထဲက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည်။
အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ထားခြင်းသည် တိုင်းပြည်ကြုံနေရသည့် ပြဿနာများ၏ အဓိက လက်သည်ဖြစ်သည်ဟု ဇင်ဘာဘွေ အာဏာရှင် မူဂါဘေးက စွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။ “ခုလို တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်စွက်ချင်တဲ့ ကိုလိုနီအင်အားကြီး နိုင်ငံက ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်တယ်” ဟု အာဏာရှင် မူဂါဘေးက ပြောခဲ့သည်။
စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ခံထားရသည့် နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲတဦးက ယခုကဲသို့ ရွှေတွေချရောင်းဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းသည် ဒဏ်ခတ်မှု ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု သိလာပြီးသည့်နောက် ရွှေဝယ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံရသည့် Firstar ကုမ္ပဏီက လက်မခံဘဲ နောက်ဆုတ်သွားသည်။
Firstar ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဘန်းဟာဂါမန်းက လန်ဒန်မြို့ထုတ် တိုင်းသတင်းစာကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်“ဘယ်လို အရောင်းအ၀ယ်ကဖြစ်ဖြစ် ရလာတဲ့ ငွေတွေနဲ့ လက်နက်တွေဝယ်ပြီး လူတွေပိုသတ်မယ့် နိုင်ငံမျိုး ပြည်သူတွေ ကာလ၀မ်းရောဂါဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတွေဆီက ရွှေဝယ်ဖို့ ကျနော်တို့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဒီရွှေတွေဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ရွှေတွေပါ။ ဒီရွှေရောင်းသူတွေဟာ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေပါ” ဟု ပြောသည်။
ဇင်ဘာဘွေ ဒု-သမ္မတ မူဂျူရူး၏ သမီးနှင့် သားမက်တို့၏ ရွှေရောင်းမည့် ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အီးမေးများနှင့် အခြားအထောက်အထားများကို Firstar ကုမ္ပဏီက ၄င်း၏ ၀ဂ်ဆိုက်တွင် တင်ထားသည်။ ဒု-သမ္မတ မစဂျွိုက်စ်မူဂျုးရူးနှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ (ဇင်ဘာဘွေ စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်း) တုိ့သည် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး အာဏာအရှိဆုံး လူတန်းစားတွင် ပါဝင်သည်။ River Ranch Diamond စိန်တွင်းအပါအ၀င် ရတနာသတ္တုတွင်းများစွာ ပိုင်သည်။ မူဂျုးရူးပိုင် River Ranch Diamond စိန်တွင်းကုမ္ပဏီသည် သွေးစွန်းသည့် မှောင်ခိုစိန်များကို ဇင်ဘာဘွေ ရတနာများနှင့်ရောပြီး တောင်အာဖရိကသို့ ခိုးထုတ်နေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့စိန်ကောင်စီက စွပ်စွဲထားသည်။ ယခင် ကွန်ဂိုခေါင်းဆောင်ဟောင်း လောရင့်ကာဘီလာ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရထားသည့် ကွန်ဂို ရတနာသတ္တူတွင်းများမှ ဇင်ဘာဘွေ အာဏာရှင် မူဂါဘေး၏ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ မည်မျှ အကျိုးအမြတ်ရနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှ အထောက်အထား ပြုစုထားပြီး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈-၂၀၀၂ စစ်ပွဲတွင် ဇင်ဘာဘွေ တပ်တွေ လာရောက်ကူသည့်အတွက် ကာဘီလာက ကွန်ဂို ရတနာသတ္တုတွင်းတွေ လုပ်ခွင့်ပေးပြီး ပြန်ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by LRDP at 11:19 AM0comments Links to this post
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ်(ဒေါက်တာလှိုင်နီ)ကွယ်လွန်ခြင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ်(သာကေတ)
ဒေါက်တာလှိုင်နီ သည် ၂၂-ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ ၂၀၀၉ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည် ။
ဦးမောင်မောင်လတ် သည် အဖ ရဲဘော်သုံးကျိတ်ဝင် ဗိုလ်ရန်အောင် နှင့် အမိဒေါ်လှိုင်လှိုင် တို့ ၏သား
ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ၏ပြည်သူ့ လွတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သာကေတ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ် မှအနိုင်ရခဲ့သည်။။
ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ် မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှပေးအပ်သောတာဝန်များ ကိုကျေပြွန်
စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေသည်။။ ယခု ကဲ့သို့တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီ မရသေးခင် ကွယ်လွန်သွားသည့်
အတွက် မိမိ မှ အလွန်အမင်နှမျောကြေကွဲရပါသည်။။ ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ်၏ ပြည်သူလူထု
အပေါ်ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ခဲ့သည့် အတွက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း နှင့် ကျန်ရစ်သောမိသားစုများနှင့်
Posted by LRDP at 12:49 AM0comments Links to this post
Naing Ko KoFeb 19, 2009 (DVB)–
An election in Burma is supposedly going to be held in 2010 by the elite generals. Within the half century from 1960 to 2010, it will be the second election held by the military.Elections in Burma are precisely identical to scarce goods, with neither availability nor choice for the public. Since Burma became an independent state, it has had only three “democratic general elections" that were held in 1952, 1956 and 1960 respectively, all under the administration of the Anti-Fascist People's Freedom League which ruled Burma for 10 years.Within the 28 years from 1960 to 1988, unsurprisingly, there were no democratic general elections held by the Revolutionary Council or the Burma Socialist Programme Party that was formed after the first military coup. However, the BSPP rana"synthetic election" asatotalitarian and bureaucratic mechanism in 1974. As the BSPP wasamilitary-based-party, the election was absolutely managed by the party bosses and generals. The voters did not have any choice and were ordered to vote for both the single party system and "pioneer dictators".Although millions of people demanded democracy during the four-eights uprising, the military seized state power again on 18 September 1988 and branded itself the State Law and Order Restoration Council. The junta held its first ever multiparty democratic general election on 27 May 1990 and reappointed an election commission and promulgatedamultiparty democracy election law that were both formulated by the BSPP regime during the “summer of democracy” in September 1988.There were more than two thousand candidates from 93 political parties who stood in the 1990 election full of dreams and promise. Although the election campaigns of the 93 political parties were heavily controlled by the junta, the National League for Democracy won 392 out of 485 seats. The Shan Nationalities League for Democracy won 23 seats and the BSPP’s new incarnation, the National Unity Party, won just 10 seats. Here, most Burma watchers claimed that it wasafree and fair election although there was no freedom of expression and no free international monitoring system.According to Huntington's third wave democratisation thesis of 1993 and many other political theorists, elections areamajor tool for the democratisation process. In 1990, the 38-million-strong population of Burma overwhelmingly honoured the legitimacy and authority of the election to bring about the rule of law and to manage the state mechanism. But the military generals have neither transferred state political power to the election winning parties nor convenedapeople's parliament.Consequently, the elected MPs of all election winning parties have not convenedaparliament themselves, though they have the moral and political responsibility to carry out the people's legitimate decision as reflected in the election result. While the winners of the 1990 election claim that they have political legitimacy, the military junta argues that it has de jure legitimacy. Consequently, the military has not honored the election result, while the 1990 MPs-elect have not formedademocratic government themselves in the sovereign mainland of Burma. Thus, Burma has becomeaparadox of bulletocracy and representative democracy.In addition, the MPs of 1990 election have been applying elite-driven transition models, including policies of national reconciliation and UN-brokered dialogue with the generals, while the generals have repeatedly and officially rejected their demands. Yet again, the situation since the 1990 election has remained absolutely stagnant and the opportunity foracivilian-initiated transitional process has not yet been consolidated.There is no comprehensive winning strategy or policy platform on how to applyaregime change model for Burma after the election, either from within the military junta or from the leaders of political parties or MPs who are regularly asking international agencies such as the United Nations, the European Union and ASEAN to intervene in the power games in Burma.During the last 20 years, all stakeholders, the military junta and all political parties have released occasional statements calling for dialogue with the elite military generals or for parliament to be convened. But there has not beenaparadigm shift regarding regime transition orapower reconfiguration resulting from the 1990 election. It has not brought about eitherabreak-even point orabalance of power between the competing claims about democracy in Burma.On the other hand, the generals have also applied their own non-democratic transition plans such as the National Convention, national reconciliation and the Seven-Point Road Map towards "disciplined democracy". The junta has given many promises that these plans are leading towardsademocratic Burma, but there have been no tangible results yet. The people of Burma have suffered from the broken promises from the both the junta and the election winners of 1990.Now, once more, the junta has repeatedly promised another election will be held in 2010. As the time draws nearer, there will be many political parties that aim to participate in the junta’s planned election. On the exile front, the political legitimacy of the 1990 MPs will shrink and there will beadilemma of how to claim political legitimacy after the new 2010 election. Some demographic figures have estimated that there isapopulation of 56 million in Burma at the moment; there are millions of young voters who have never voted in any elections.Will this 2010 election override the results of the 1990 election? Will the 2010 election be postponed, or will the junta transfer political power to the 1900 election winners or share power with them? Will the MPs elected in 1990 withdraw from being MPs or will they go back to Burma to join the armed resistance? Will they maintain the status quo and ask the UN to fight for them to get political power?Essentially, the people of Burma have been waiting for the fulfillment of the promises from the 1990 election winners and still millions of members of the new generations are driven to neighboring counties to meet their basic needs.Naing Ko Ko isapostgraduate scholarship student in the Department of Political Studies at the University of Auckland in New Zealand. He isaformer political prisoner.
Posted by LRDP at 8:10 PM0comments Links to this post
ဟေး တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတော့ ဘယ်ထောင်က ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားဘယ်နှစ်ယောက်
လွတ်တာ ဘယ်လောက်ပါတယ် ဟေ့ ဆိုပြီး မီဒီယာတွေ ဘလော့ကာတွေ ဂရုမေး(လ်)တွေကနေ
ချက်ချင်းဖြန့်ဦးဝင်းတင်ဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာတရားကြီးမားပြီးထောင်ဗူးဝကတောင်သွားစောင့်ရှာနေ
တာ မိသားစုတွေခမျာမှာလည်း ကိုယ် ဖခင်ကိုယ့်သား ကိုယ်မယားကိုယ့်ခင်ပွန်းများ ပါလေမလား
ပေါ့ ။မိသားစုတွေကိုရော အကျဉ်းကျခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရော ကျမ ကိုယ်ချင်းစာနာမိ
ပါတယ် ။ နှစ်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အပြင်လောက ကို လူတိုင်းတမ်းတကြရတာပဲလေ တစ်ချို့ တိုက်
ခန်း တွေဆို လရောင် ကြယ်ရောင်လေးတွေကိုတောင်မှမမြင်ရပဲကိုး ခဏ တဖြုတ်ပဲနေရနေရ နှစ်
ကြီးကြီးပဲကျရကျရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျမှန်သမျှ မှာ အပြစ်ဆိုတာ စိုးစဉ်းမရှိခဲ့ကြပါ ။။ မိမိယုံကြည်
ချက်ကိုမိမိဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် စနစ်ဆိုးအောက် မှာ စစ်သုန့် ပန်းတွေ တဖြစ်လဲ နိုင်ငံရေးအ
ကျဉ်းသားအဖြစ်ခံစားနေကြရတာပါ ။ တစ်ရက် တစ်နာ၇ီ တစ်မိနှစ်တစ်စက္ကန့် မျှ ဒီလူတွေဟာ
ထောင်ဒဏ်နဲ့ ထိုက်တန်သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး ဒါကို စစ်အုပ်စု ဟာ သူတို့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်
နိုင်ဖို့နှစ်ကြီးတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးချခဲ့ကြတာပါ။။
ကျမတို့ ဘာကိုဝမ်းသာရမှာလဲ ဘာကိုကြေနပ်ရမှာလဲ ကျမတို့ အရင်းတွေနဲ့ သူတို့ အမြတ်ထုတ်သွား
ကြပြန်ပြီကော - ကျမတို့ ရဲဘော်တွေဆန္ဒတူတွေ မဟာမိတ်တွေ ။ဒီမိုကရေစီရရှိရေးမှာရှေ့တန်း
ကပါဝင်ရဲတဲ့ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ကို ရက်ရက်စက်စက် ဆယ်ကဏန်းတွေရာဂဏန်းတွေ တကျွန်း
ဒဏ်တွေ နဲ့ထောင် ဒဏ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချခဲ့တယ် ရှေ့ ကနေ ရာချီချပြလို့ ပိုကြောက်မယ် ထင်
ပေမဲ့ အာဇာနည်တွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သူရဲကောင်းအာဇာနည် အညတြ အာဇာနည်တွေ မရပ်
မဆဲထပ်တလှဲလှဲပေါ်ခဲ့တယ် ။အဲဒီ့ သူတွေ ကပြည်သူအတွက်ပေးဆပ်နေတဲ့ အရင်းအနှီးတွေကို
မတရားသဖြင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေက သူတို့ နိုင်ငံတစ်ကာကို အပြ မျက်နှာလှဖို့လွှတ်ပြ
လိုက်တာကိုပဲ ကျမတို့ တစ်တွေက ကြေနပ်ရမလိုဖြစ်နေတယ် ။အမှန်တကယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ ။။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ ထောင်သက် ၁၉ နှစ်ပါ သူ့ ကို စွတ်ဆွဲထားတဲ့ပုဒ်မတိုင်းဟာမတရား
တွေကြည့်ပါပဲ ကိုသက်ဝေ (ခ) ကိုပေါက် သူဆိုလည်း လွတ်နီးတစ်ယောက်ပါပဲ ဒီလို ထောင်ထဲကို
အပြစ်မရှိပဲဝင်ရစစ်အုပ်စုတို့ အမြတ်ထွက်ဖို့ အတွက်တော့ကိုယ်တွေ ရဲ့ မွေးရာပါ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို
သူတို့ ကပဲ ပြန်လည်ပေးသလိုလို (ကျေးဇူးတင်နေရဦးမဲ့အနေအထား)နဲ့မင်းသားကြီးလုပ်ပြလိုက်
လေတော့ ကုလ နဲ့ဘုမသိဘမသိ နိုင်ငံတစ်ချို့ က သြဘာ ထပေးလိုက်ကြပုံများဖြင့် ကျမ ကြား
ရ အင်မတန်မှ စက်ဆုတ်လှပါတယ် ။။
စစ်အုပ်စုဟာ သူတို့ အမြတ်ထွက်ဖို့ကို လူ့ အခွင့်အရေးတွေ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကျောင်း
သားအခွင့်အရေးတွေ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေထမင်းနပ်မှန်ရေးတွေ တိုင်းရင်း
သားအခွင့်အရေးတွေ ပြည်သူ့ အာဏာရရှိရေးတွေ အဲဒီ့အရေးတွေကို နှလုံးသားတွေ ဘ၀တွေ
အသက်တွေ နဲ့ ပေးဆပ် နေတဲ့ သူတွေကို စတေးပြီး ---
ဒီမိုကရေစီသမားတွေလွှတ်လိုက်ပြီဗျာ ကဲ --စီပွါးရေး ပိတ်စို့ ထားတာဖွင့်ပေးတော့ လို့ 
ပြောနေတဲ့အတိုင်း ပဲ -- ခုလို ဖမ်းထောင်နှစ်ကြီးချ
နည်းနည်းပြန်လျော့ နှစ်စေ့နီးတွေကို လွှတ် နဲ့ဖဲကစားဂျင်ကစား သလို ကုလားဖန်အမျိုးမျိုးထိုးပြီး
ကိုယ်ကျိုးအတွက် အကွက်ဆင်နေကြတာပါပဲ ။ဒီ့အတွက် ခု လွတ်မြောက်မှုတွေဟာ သူတို့ စေတနာ
ပါလို့သူတို့ ပြည်သူတွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး.ယူချင်လို့လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး ။။
ဒီ့အပြင် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ၄၀၁ ဆိုတဲ့ပုဒ်မကြီး နဲ့ လွှတ်လိုက်သေးတယ် ။၄၀၁ ဆိုတာ ဒီလူဟာ
သူယုံကြည်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ် ရင် ပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေပါထောင်ဒဏ်ပြန်ခံစားစေ ဆိုတဲ့
သဘောပါ ။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ထောင်သက်စေ့လို့ ကျော်မှလွှတ်ပေမဲ့ ဒီပုဒ်မကြီးကို လက်မှတ်
ထိုးခဲ့ရပါသေး တယ် ။။
အခု ရဲဘော်တွေလည်းဒီ့အတိုင်းပါပဲ ဒီတော့ ဘာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လဲ ? ရူးနေတဲ့သူ ကို
သွားပြောရင်တော့ယုံပေမပေါ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျမတို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အနေနဲ့ ကတော့
ကျမတို့ အရင်းထဲကနေသူတို့ အမြတ်ထုတ်သွားတာသိနေတော့ ဒီထက်ပိုနာတယ် ဒါ့ထက်ပိုတိုက်
မယ် ။ မ ရ ရတဲ့ နည်းနဲ့ ဘယ်နည်း နဲ့ မဆို စစ်အုပ်စု ကိုပြုတ်အောင်တိုက်ရမယ် ။စစ်အုပ်စု
အလျောပေးသားပဲလို နိုင်ငံတစ်ချို့ က မြင်နေတာတွေကိုလည်း ကျမတို့ ခြေဖျက်ပစ်ရမယ် ။
တကယ်လွှတ်မှာအကျဉ်းသား ၆၀၀၀ - တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးလူသား အသက်ရှိတဲ့လူတွေထောင်
ခြောက်ထဲကလွတ်တယ်ဆိုရင် ပဲ လူဆန်တဲ့လူတိုင်းဟာ ပီတိလေးတော့ ဖြစ်မိမှာပါပဲ ။။
ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ စိတ်ရင်းက တော့ ကြိတ်ရယ်နေဦးမှာပါ ငါတို့ အကွက် ထဲ ဂန်ဘာရီ ၀င်
သွားပြီ ဘန်ကီမိုး ၀င်သွားပြီလို့ ပေါ့ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုရင် ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ငြိမ်း
ဆိုပြီးလွှတ်တိုင်း လွတ်နီးတွေ ကြည့်ပါပဲ -- နိုင်ငံတော် လာမလား ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးအကျဉ်းကျ
တွေရဲ့ မျော် နေတဲ့အရာကို နိုင်ငံတော် လို့ (ထောင်အခေါ်) လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာပြီးတိုင်း ရိုးရိုး
အကျဉ်သားတွေဟာ သက်ပြင်းချပြီးမျက်ရည်လည်ပြီးကျန်ခဲ့ကြတာကြည့်ပါပဲ -- တကယ်
လွှတ်တာ လွတ်နီးတွေ ကိုကြည့်ပါပဲ ၀ရန်တွေ ကို ၀ါဒါ တွေက စစ်ဆေးတဲ့အခါတိုင်းလွတ်နီး
တွေကိုသာ ထဲ့လေ့ရှိတာပါ .. သိတ်ရီစရာကောင်းတာ တစ်ခု ၇ှိပါသေးတယ်။ ဆေးမှုနဲ့ ၁၀
နှစ်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ နေသား(ထောင်ကျနှစ်) ပြည့်တာ မလွှတ်သေးလို့ 
မေးမြန်းတဲ့အခါ လျော့ရက် တွေ လိမ်လည်တွက်ပြီး မကြာမှီနိုင်ငံတော်လာရင် သူ့ ကိုပါစာရင်း
ပါအောင် စောင့်စေခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ။။
ဒီတော့ နိုင်ငံရေးသမား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို အညိုးအတေးထားပြီး အသုံးချတာမပြော
နဲ့ရာဇ၀တ်ဘေး နဲ့သူတွေတောင် ဘာလွတ်ငြိမ်းခွင့်မှ မဟုတ်ပဲ နှစ်စေ့တွေ လွှတ်နီးတွေကို
တစ်ပြိုင်နက်စုပုံပြီး အလွှတ်ပြ ကုလသမဂ္ဂ ကိုညာချတာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးချွန်ဆုံးသော
မြန်မာနိုင်ငံက ကလိမ်ခြုံစစ်အစိုးရပဲ လုပ်တက်ပါတယ် ထူးထူးခြားခြား ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ဒီလောက်
မျက်နှာပြောင်တိုက်လွန်းတဲ့ စစ်အုပ်စု က သန်းရွှေရဲ့မျက် နှာ ဆီသုတ်ထားလေသလားတောင်
မှတ်ယူရပါတယ်။ဒါကို အလိမ်ခံချင်လွန်တဲ့ ဂန်ဘာရီ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ များ ၂၀၁၀ ကိုစိတ်ဝင်စားရ
ပါသလဲ သူ့ ကိုလည်းဝေခွဲမရတော့ပါဘူး --- ဗိုလ်ချုပ်စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကျမတို့ ကိုယ်
တိုင်တိုက်ယူမှရ မှာပါပဲ ။ကျမတို့ အရင်းတွေနဲ့ သူတို့ အမြတ်ထုတ်နေတာတွေ ဆက်မဖြစ်ဖို့ 
နည်းဗျူဟာကောင်းတွေ နောက်ကို အခိုင်အမာရပ်တည်ပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ကြပါစို့ ။။
Posted by LRDP at 10:25 AM0comments Links to this post
ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေရှေ့ မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတယ်။
ကျွန်တော် ယူထားတဲ့နာမည်နဲ့ 
ဘယ်သူနဲ့ မှ မတူတဲ့ ညီမျှခြင်းတစ်ကြောင်း
အဖြစ်အပျက်တွေသာ တစ်စက်ပြီးတစ်စက် လောင်းထည့်ကြည့်လိုက်
ကွဲပြားတဲ့ အဇ္ဈတ္တတွေ ရာနဲ့ ချီပြီး ထွက်လာမယ်။
သိုးအုပ်တိုင်းမှာတော့ သိုးမည်းတွေ ရှိကြမှာပဲ။
စကြာင်္ဝဠာတစ်ခုလုံး သိမ်းကျုံးရိုက်နိုင်တဲ့ ဝါးလုံးရှည်ကိုတောင်
ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာလည်း မီးလုံးတစ်လုံးရှိတယ်။
သူ့ ခေါင်းထဲမှာလည်း မီးလုံးတစ်လုံးရှိမယ်။
ကိုယ့်ခေါင်းထဲက မီးလုံးကို ကိုယ်အလင်းဆုံးထင်ကြတာပဲ။
ကိုယ်စီ ခြုံထားတဲ့ အရွက်တွေအောက်က
မမြင်ဖူးသေးပဲနဲ့ မဖြီးပါနဲ့ ။
အပြစ်မဲ့သူချင်းဆိုရင်တော့ ရွေဘော်ထိုး နိုင်ရမယ်။
ဘယ်သူ့ ကိုမှတော့ မလှောင်ခဲ့ဘူး။
အဆီအနှစ်တွေကို နှလုံးသားနဲ့ လိုက်စုပ်မယ်။
တိမ်တစ်တိုက်လို့ သမုတ်ချင် သမုတ်တော့
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ ပျံနေတဲ့ငှက် လုပ်မယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ငှက်တစ်ကောင်လည်း ရှိတယ်။
မျက်လုံးတွေကို စာရွက်ပေါ်ဆီ ဝဲပြီးတော့
နာမည်တွေ တွဲပြီး ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။
(အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဦးတည်ချက်ကောင်းတဲ့ကဗျာတွေရေးတဲ့အတွက်ကိုကောင်းကင်ကိုကဗျာကို လေးစား
Posted by LRDP at 12:45 AM0comments Links to this post
ထောင်ထဲ (၁၉) နေခဲ့ရတဲ့ အမရပူရ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် လွတ်လာပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းသားပေါင်း ၆,၃၀၀ ကျော်ကို လွှတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာ အမရပူရ လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၀ ယောက်ကျော် ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ အခုထိ သိရှိထားပါတယ်။ ယခင်တခေါက် အကျဉ်းသား ၉,၀၀၀ ကျော် လွှတ်တုန်းကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၆ ယောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘယ်နှစ်ယောက် လွှတ်လိမ့်မလဲဆိုတာကို ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေကြပါ တယ်။ ဦးတင်မောင်သန်းက တင်ပြထားပါတယ်။ရွေးကောက်ခံရတဲ့ အမတ်တွေထဲမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက နှစ်ပေါင်း ၁၈ နှစ်ကျော်တောက်လျှောက် အကျဉ်းသက်တမ်းအရှည်ဆုံးအမတ် အမရပူရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကို စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကို ပြည်ပမှာ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ဦးဆောင်သူတယောက်အဖြစ် စစ်အ စိုးရက သတ်မှတ်ပြီး၊ ထောင်ဒဏ်၂၅ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အ ရေးအခြေအနေတွေကို ရေးသားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် ယိုဇိုယိုကိုဒါဆီကို ပေး ပို့ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ထပ်မံစွပ်စွဲပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စုစုပေါင်း ထောင် ဒဏ် ၃၇ နှစ် ချမှတ်ခံထားရတာပါ။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် လွတ်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာယုယုမေက ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်။“တကယ်လွတ်သွားပြီ။ ၄ နာရီခွဲလောက်ကျတော့ သတင်းတွေက ကြားနေပေမယ့် ၃ နာရီကျော်ကျော် လောက်ကျတော့ ထောင်ပြင်ကို ထုတ်နေပြီ။ ကားစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် အန်တီတို့က တရားဝင် ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်၊ ထောင်ကို ဖုံးဆက်မေးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ ၄ နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ထောင်ကနေ ပြီးတော့ - ဟုတ်ကဲ့၊ လွတ်သွားပါပြီလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဘယ်မှာထားလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့က မပြောဘူး လေ။ ဖုန်းကို ချပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်ဆက်ရမှန်းတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်ရောက်နေမှန်းလဲ မသိ ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးညင်းက ဦးရွှေစိန်ကလည်း ပါတယ်။ သူ့သမီးလေးကနေပြီးမှ ဆက်တာ။ အဖေတို့တဲ့ ဟင်္သာတည်းခိုခန်း၊ မြစ်ကြီးနားမှာ ရောက်နေတယ်တဲ့။ သူနဲ့အဖေနဲ့ စကားပြောပြီးပြီပေါ့။ ဦးဇော်လည်းပါတယ် ဆိုတာနဲ့။ ကျမတို့က အဲဒီဟင်္သာတည်းခိုခန်းကို ဆက်လိုက်တော့ အဲဒီ ဦးဇော်နဲ့ တွေ့ရတယ်ရှင့်။ လောလော ဆယ်တော့ သူနေကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ မနက်ဖြန်ကို သူတို့မီးရထားနဲ့ပဲ စီစဉ်ပေးလိမ့် မယ် ထင်တယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုပဲ ပြောပါတယ်။ အခုတော့ အက်စ်ပီကဆိုလားပဲ ခဏဆိုပြီးတော့ ခေါ်သွား တယ်တဲ့။ ကျမတို့ကတော့ မျှော်လင့်ထားတဲ့နေ့ ရောက်လာတာပေါ့နော်။ အဲဒါအတွက် ၀မ်းသာတာပါပဲ။ ဒါပါ ပဲ။”အခုလို လွှတ်လိုက်တဲ့အထဲ မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘယ်နှစ်ယောက်ပါဝင်မယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကို စဉ်းစားကြမယ့်သူတွေကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြမှာပါ။ အာရှနိုင်ငံခရီးအတွင်း မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကို ပြန် လည်သုံးသပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြုသဘောပြောင်းလာအောင် ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး အယူအဆတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်လို့ မစ္စ ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ၀ါရှင်တန်ပို့စ် အယ်ဒီတာကတော့ “မူဝါဒ ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှာ အစစ်အမှန် လက်တွေ့ကျဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လာသူတွေရဲ့ မိ သားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကတော့ ၀မ်းသာနေကြပါတယ်။ ခရမ်းမြို့နယ်အမတ် ဦးကျော်သွင်ဟာ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်နဲ့ တိုက်ထဲမှာ အတူနေခဲ့တဲ့ သူပါ။“ကျနော်က ကိုကြီးဇော်လို့ အမြတ်တနိုး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ခေါ်ရတဲ့ အစ်ကိုကြီးတယောက် ဒီနေ့ပဲ လွတ်လာတာ ကို ကျနော်သိရတဲ့အခါမှာ မျက်ရည်လည်လောက်အောင်၊ မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ကျနော်ဝမ်းသာပါ တယ်။”ဦးကျော်သွင်လို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေသာ မကပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂက လည်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီဟာ လက်ချည်းဗလာ ပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့ မီဒီယာတွေက အရေးခံနေရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း အခုလိုလွှတ်လိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဘယ်နှစ်ယောက်ပါမလဲ စောင့် ကြည့်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ ဖိအား ပေးခံနေရပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုသွားဖို့ဆိုရင်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရက လာမယ့်လတွေမှာ လာထိုက်ကြောင်း အချက်ပြဖို့ လိုလိမ့် မယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ “အခုလို အကျဉ်းသမားတွေကို လွှတ်လိုက် တာ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းမားတွေကို လွှတ်လိုက်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုကြိုဆိုတာဟာလည်း မျှတရာရောက်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်” လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ The Hindu သတင်းစာကို မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောပါတယ်။ လွှတ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက ၁၀ ယောက်ကျော်ပဲ သိရပါသေးတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမား လွှတ်လိုက်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ပြောရာမှာ တောင် အဲသလိုကြိုဆိုတာက မျှတပါတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတောင် ဆင်ခြေပေးနေရ ရှာတဲ့အဖြစ် ဖြစ်နေပါတယ်။
Posted by LRDP at 7:58 PM0comments Links to this post
15 February 2009မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားပြီး ဆောင်ရွက်ကြသူတွေအတွက် ဆုချီးမြင့်ပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားတခုကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က နော်ဝေးနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကို နော်ဝေနိုင်ငံရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တချို့က ဦးစီးပြီး စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ ပဓာန ကျတာမို့ ဒီ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်း ဆုကို ချီးမြှင့်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ရှိုး က မေးမြန်းစုံစမ်းထားပါတယ်။အခုလို အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆု ကို ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ ၅ ဦးကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဌ လက်ရှိထောင်တွင်း အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် က ဦးပူကျင်ရှင်းထန်၊ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိထောင်တွင်း ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငွေသိန်း၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေးအဖွဲ့ချုပ်က ဦးအေးသာအောင်၊ အရင်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ပဒိုမန်းရှာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုကို နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာ ရှိနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေက ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ပေးအပ်ချီးမြင့်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ဒီဆုဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိရအောင် အဲဒီကော်မတီမှာ အဓိကပါဝင်သူထဲက တဦးဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုသူရိန် ကို မေးကြည့်တော့ သူက အခုလို ဖြေပါတယ်။“ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးက အဓိက လိုအပ်ချက်ပါပဲခင်ဗျ။ အဲဒီ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရင်ကြားမစေ့နိုင်ဘဲ မည်သည့်အဖွဲ့ မည်သည့်သူကမှ ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ လုပ်လုပ် တိုင်းပြည်အတွက်ရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရော ဘာတခုမှ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့တော့ ဒီလိုပဲ ခံယူတယ်ခင်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားသွေးစည်းမှုကြီးက ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်နေပြီခင်ဗျ။ အဲတော့ ကျနော်တို့က အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုလာတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီအခါမှာ ကျနော်တို့က အပေးအယူ အလျော့အတင်းတွေ ရှိဖို့ လိုလာတယ်ခင်ဗျ။”ဟုတ်ကဲ့။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘယ်လို အချက်တွေကြည့်ပြီးတော့ ကော်မတီက ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲရှင့်။ -“ဒီခေါင်းဆောင် ၅ ဦးကို ပေးရတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုတွေဟာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ စံနမူနာ ယူသင့်တယ်။ အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် သူတို့က တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ် ခံရတယ်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတယ်။ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် ခံရတယ်။ ထောင်တွင်းအကျဉ်းကျ ခံရတယ်။ ဒီလို ကြားကနေပြီးတော့ သူတို့ တစိုက်မတ်မတ် နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့က အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပေးတာခင်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးတခုလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတိုက်အခံ အချင်းချင်းကြားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတိုက်အခံနဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရနဲ့ကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ဟာ အပြန်အလှန် တန်ဖိုထားတတ်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ ရှိဖို့ စိတ်ဓါတ်တွေ မွေးဖို့ ကျနော်တို့ လိုအပ်တယ်ခင်ဗျ။ ဒီအခြေခံက ကျနော်တို့ ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲလုပ်လုပ် ကျနော်တို့ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ကျနော်တို့က ပြယုဒ် အဖြစ်နဲ့ ကျနော်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့ ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို ညီညွတ်မှုရဲ့ ပြယုဒ်အဖြစ် ကျနော်တို့ ဒုတိယ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့ ဒုတိယပင်လုံ ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျနော်တို့ ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”ဟုတ်ကဲ့။ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေသူတွေအကြား ပြန်လည်ရင်ကြား စေ့တာကို ဆိုလိုတာလို့ နားလည်းထားကြတယ် ဆိုတော့ အခု ကိုသူရိန်တို့ ရွေးချယ်တဲ့ အထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ဘက်ကပဲဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရဘက်ကိုရော ဒီလိုဆုမျိုးနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ အစီအစဉ်ရော ရှိနိုင်မလားရှင့်။ -“ကျနော်တို့ အချင်းချင်းတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ နအဖ နဲ့ပါ ကျနော်တို့က အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိအောင် လုပ်နိုင်တာ၊ သူတို့ဘက်က တကယ် စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ လုပ်ဆောင်လာတယ် ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအနေနဲ့ ဒါကို စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ တကယ်လုပ်ဆောင်လာတယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ဂုဏ်ပြုရမှာပဲခင်ဗျ။ ဒီဆု ချီးမြှင့်ဖို့ ကျနော်တို့က ၀န်မလေးဘူးခင်ဗျ။”ဆက်လက်ပြီး ကိုသူရိန် က ဒီလိုဆုမျိုးကို နောင်လာမယ့် နှစ်တွေမှာလည်း ချီးမြှင့်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က အခမ်းအနားမှာ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံသူရသူ တဦးမှ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ မနှစ်ကကျဆုံးသွားတဲ့ ပဒိုမန်းရှာ ကိုယ်စား ဆုလာရောက် လက်ခံခဲ့သူ သမီးဖြစ်သူ နန့် ဇိုရာဖန် ကလည်း ဒီအခမ်းအနာမှာ သူရဲ့ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပါတယ်။“ကျမ ပဒိုမန်းရှာ ရဲ့သမီး တယောက်အနေနဲ့ ပြီးတော့ ကရင်တမျိုးသားလုံး အတွက် ကျမ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့အဖေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေပေါ့နော်။ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက်ရော၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီညွတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တန်းတူရေးပေါ့နော်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ ဒီ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်ကို သူ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။”မနေ့က ဒီအခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့နေ့ဟာ ပဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာ တနှစ်တိတိ ဖြစ်တာမို့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာရော ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေအကြားမှာပါ အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဒိုမန်းရှာကို ဘယ်သူက လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကတော့ အခုထိ လက်သည် မပေါ်သေးပါဘူး။
Posted by LRDP at 4:23 AM0comments Links to this post
ကျမတို့ တိုက်ပွဲ တစ်ခုက အောင်မြင်ခါနီးမှာလည်း ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့အယူအဆအားပြိုင်မှုအထင်
အမြင်လွဲမှာမှုတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်ဒါလည်အောင်ပွဲနီးလို့ အခက်အခဲပိုတွေ့တယ် ဒီအခက်အခဲ
ထဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အားတွေကြောင့်အရည်အသွေးပိုတက်လာမှာပါ ။။ ခြွင်းချက်တော့
အားစစ် မစစ် ဆိုတာ တော့စဉ်းစားချင့်ချိန်ရမှာပေါ့ တစ်ချို့ ခံနိုင်ရည်အားနည်းသူအတွေ့
အကြုံအရ ကျော်ဖြတ်မှု နည်းသေးသူတွေမှာတော့ စိတ်ပျက်တာ အားလျော့တာမျိုးဖြစ်
တက်ပါတယ်။ကိုယ်တွေရဲ့ပြဿနာကြားမှာအဓိကဇစ်မြှစ်ဟာဘာလဲဆိုတာတော့ရှာဖို့ လို တယ်
စေတနာတွေ နဲ့နည်းဗျူဟာတွေယူဆတာတွေ လွဲချော်သွားတာမျိုးကိုတော့ပြင်လို့ ရနိုင်ပေမဲ့
ကိုယ့်တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံး NGO တွေရဲ့ အ၀ါးမျိုမခံရဖို့ တော့ သတိချပ်ကြဖို့ ဒီအချိန်
သိတ်အရေးကြီးပါတယ် အဆုံးစွန်ပြောရရင် ပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ဖို့ ကျနော်ကျမ
တို့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါတော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတာပါ လို့ ပြောနေတဲ့အားလုံးအားလုံး ကျမ
အပါအ၀င် ဒီသူတွေဟာ ပြည်ပမှာစားသမျှထမင်းပြည်သူနဲ့မကင်းပါဘူး ဒုက္ခသည်လျောက်ပြီး
နိုင်ငံခြား မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက် နေရသူတွေတောင် ကိုယ့်လုပ်စာဟေ့ လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့
မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်စာနာမှု နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဒပ် တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ
ခိုလုံခွင့်ရကြတာပါ ။(တော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုလို့ အမည်ခံထား သူတွေကိုဆိုလိုတာပါ
နိုင်ငံရပ်ခြား အလုပ်ထွက်လုပ်ရင်းမှ စိတ်ပါဝင်စားလာတဲ့ ဘလော့ကာများ စေတနာရှင်အလှူ
လက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ချောက် ထဲကနေ နွံထဲကျတော့မဲ့ဆဲဆဲပါ
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ် ယုံကြည်ချက်ဟာနအဖ ကိုတိုက်ဖို့ ဆို ဘယ်သူဘယ်နည်းနဲ့ တိုက်တိုက်
နောက်ထပ် မဲခွဲခြင်းတွေတော့ပြုလုပ်ဖို့ မထိုက်ဖူး ဆိုတာကျမတင်ပြချင်ပါတယ် ။
သိတ်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံတစ်ချို့ ဟာ မိမိတို့ ရဲ့ တော်လှန်ရေးနည်းနာတွေကိုသူ
တို့ အယူအဆတွေနဲ့ စွပ်ဖက်လာတာသိတ်ဆိုးပါတယ် ပြုသူတွေဟာအပြစ်မရှိပေမဲ့လက်ခံ
ဆောင်ရွက်သူတွေဟာ သိတ် ကို ရှက်စရာကောင်းပါတယ် ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျမတို့ ကိုယ်၌ ဒီလိုပြည်ပ နိုင်ငံတွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ မကင်း
နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျမတို့ တော်လှန်ရေး ဟာ NGO ရဲ့လက်အောက်မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်သင့်ပါ
ဘူးကျမကြားရပါတယ် သိလည်းသိရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုကိုကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာနိုင်ငံ
ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရားမ၀င်ကြောင်အရေးယူတင်သွင်းတဲ့ C C ကိစ္စမျိုးမှာဆိုဥရောပ
နိုင်ငံတစ်ချို့ ကဒီကိစ္စ ကိုမကြိုက် ဘူး ။ဥရောပနိုင်ငံတစ်ချို့ကမကြိုက်လို့ လိုက်မလုပ်ရဲခဲ့တဲ့
အဖြစ်မျိုးရှိခဲ့တယ် ။။ ဒီကိစ္စမှာ သူတို့မကြိုက်တာဘာဖြစ်လဲ သူတို့ နိုင်ငံအရေး သူတို
့လူမျိုးအရေးမှမဟုတ်ပဲ ကျမတို့ နိုင်ငံနဲ့ ကျမတို့ လူမျိုးအရေးမှာသူတို့ ကူညီချင်ကူညီမကူညီ
ချင်နေပေါ့ ဒီအကူအညီတွေမရတော့မှာဆိုးလို့NGO သဘောအတိုင်း လိုက်လျောညီထွေ
လုပ်မိတဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းခမျာ လည်းမျက်နှာမဖေါ်သာတော့ပါဘူး။။
ဟိုး ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုလုပ်တဲ့ အချက်(၄) (အခြေခံဥပဒေမဲထဲ့ရေး) မှာလည်းဒီလိုပဲ
ဘာတွေများ တွေးပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလဲမသိဘူး ကန့် ကွက်မဲသွားထဲ့ရေးလျို့ ဆော်လိုက်
တာဖြင့်NGO တွေကနေတဆင့်ရတဲ့ပြည်တွင်းဖုန်းဆက်ခ ဖုန်းဖိုးတင်အတော်သုံးလိုက်တယ်
ဆိုပဲ။ ဖြစ်သင့်သလားဆိုတာ ကျမလိုနိုင်ငံရေးမသိတဲ့ ပါမွှားတောင်ချင့်ချိန်မိလို့ သတင်းစာ
တစ်ချို့ မှာအမုန်းခံပြီး ဆောင်းပါးတွေရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမအင်အားကဘာမို့ တုန်းအများ
ညီတော့ ဤတောင်ကျွဲဖြစ်ဆိုသလိုပဲ နအဖ လုပ်တဲ့လမ်းစဉ်ခုနှစ်ရပ် ထဲကအချက်(၄)ကို
သွားဝင်ပတ်သတ်လိုက်ပြန်ရော --ဒါလည်း NGO အကြိုက်ပဲဖြစ်ခဲ့တာကိုး ။။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတယ် ပြည်သူတွေ စစ်အုပ်စုဘေးသဘာဝဘေးအငတ်ဘေး
တွေနဲ့ ကြုံနေတယ် ဒါတွေကိုဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက ကူညီတယ်သူတို့ အကျိုးကြည့်ကြည့်
ကိုယ်ပြန်ပေးရမှာဘာလဲ ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ်လမ်းစဉ်နဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ လဲရမယ်ဆို
ရဲရဲသာ ခါထုတ်လိုက်ပါ။ ရပ်တည်ရေးအတွက် မပူပါနဲ့စေတနာမှန်ရင်
လာပါလိမ့်မယ် ကမ္ဘာမှာတစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံအယူအဆ မူဝါဒခြင်းမတူတဲ့အတွက် တူတဲ့သူ
ကျမဒီဆောင်းပါးကိုတင်ပြရတာတော့ ကျမတို့ တစ်တွေ၂၀၁၀ကိုအပြတ်ကန့် ကွက်ဆန့် ကျင်
်မယ်လက်မခံဘူး ဘက်ပေါင်းစုံကနေ နည်းပေါင်းဆုံနဲ့ ဆန့် ကျင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါ အသံ
ထွက်လာပါတယ်။ တစ်ချို့ သော နိုင်ငံများက ဒေါ်လာထုတ်လေးပြပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
၀င်ရင် ဒါ ---ရမယ်ဆိုတာမျိုး ကူညီမယ်ဆိုတာမျိုး -- အဲဒီအခါ အညှာ မခိုင်သူများဟာ
ယိုင်လာကြပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ပြန်မ၀င်ရဲ ၀င်ရဲ နဲ့ မို့ နီးစပ်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုက်တွန်း
ပြီးမြန်မာပြည်ကို နွံထဲနစ်မဲ့အဖြစ်တော့ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့ လို့ သတိပေး တိုက်တွန်းလိုက်ပါ
Posted by LRDP at 10:01 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 9:55 AM0comments Links to this post
ဒေါက်တာစိန်ဝင်း အန်အဲလ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခိုင်းနေ
ဒေါက်တာစိန်ဝင်း အန်အဲလ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခိုင်းနေ (ကိုမိုးသီး ဘလော့မှကူးယူတင်ပြသည်)
ပြည်တွင်းမှာလာတဲ့သတင်းရပ်ကွက်တွေအဆိုရ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း အဖွဲ့ က ပြည်တွင်းရှိ အန်အဲလ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အန်စီဂျီရဲ့ပေါ်လစီ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကိုယ်တိုင်သယ်သွားရတဲ့ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ ပြည်တွင်းယူဂျီကစိတ်ပျက်စွာနဲ့We Fight We Win ကို ရင်ဖွင့်သွားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကွန်ရက် သတင်း များအရ အရလည်းဒေါက်တာစိန်ဝင်းက ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကိုစေခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နအဖ ကိုပြတ်ပြတ်သားသား ဆန်ကျင့်နေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းရပ်တည်ချက်များ ကြောင့် ဒေါ်စု နဲ့ဦးတင်ဦး ကို ချကြွေးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ သတ်နေသလို့ ဖြစ်နေတယ်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
၁- ဒေါ်စုနဲ့ ဦးတင်ဦးက က မြန်မာ အရေးကို လုံခြုံရေးကောင်စီအထိ တင်ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆို နေချိန်မှာဒေါက်တာစိန်ဝင်း က Credential Challenge ကို ဆန်ကျင့် နေတယ်။
၂- ဒေါ်စု၊ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင် တို့ က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန်ကျင်နေချိန်မှာ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း က အန်စီဂျီအဖွဲ့က ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ဖို့ ဖိအားပေးနေမှု စတဲ့လုပ်ရပ်များဟာ သံသယရှိစရာဖြစ်နေ ပါကြောင်း။
၃-နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်စဉ်က အမေရိကန် နဲ့ ပြင်သစ်ရေတပ်က စစ်သဘောင်္တွေမြန်မာ့ပင်လယ် အနီးမှာရပ်ထားစဉ် အမေရိကန်ရှိမြန်မာ လူမျိုးများက အမေရိကန် ရေတပ်ကိုဝင်ရောက်လှုပ်ရှားဖို့ တောင်းဆိုစဉ်က လည်း ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက ရေတပ်ဝင်စရာမလိုကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့အတွက် အမေရိကန်ရှိ မြန်မာ လူမျိုးများက ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကို စိတ်ကုန် သွားကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Forum of Burmese in Europe
BE, CZ, DE, DK , FIN, FR, NL, NO, PL, SE ,UK
ရက်စွဲ။ ၇/ ၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
စပိန်နိုင်ငံ၊ ဘာစီလိုနာမြို့တွင်၂၀၀၉ခုနှစ်၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၇)ရက်နှင့်(၈)ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပခဲ့ သည့်ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်ချက်များ။
၁။ စစ်အာဏာရှင်နအဖမှတဖက်သတ်ပြည်သူအပေါ်တွင်အနိုင်ကျင့်၍ပြုလုပ်ခဲ့သော၂၀၀၈ခုနှစ် အတုအယောင်တရားမ၀င်သည့်အခြေခံဥပဒေအား လုံးဝအသိအမှတ်မပြုနိုင်ကြောင်းနှင့်ဆက်
၂။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်ပတ်သက်၍လန်ဒန်မြို့”BBC World Service” မှဖေဖေါ်ဝါရီလ(၇)ရက်နေ့တွင်တင်ဆက်ခဲ့သည့်” Intellegence Square Debate ” အားကိုးကား ချက်အရယင်းလုံခြုံရေးကောင်စီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများပိုမိုတိုးချဲ့ပါဝင်သောပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှု
အားပြုလုပ်ပေးရန်နှင့်စစ်အာဏာရှင်မှပြည်သူများအပေါ်တွင် ”Crime Against Humanity ”ခေါ်လူသားများအပေါ်တွင်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက်
” International Criminal Court” (ICC) ဖြစ်သည့်နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုတရားရုံးသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်၍အရေးယူပေးရန်ကုလသမဂ္ဂ၏ ”Responsiblity To Protect (R2P)”နည်းဥပဒေအရအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့်အဝေးရောက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအ မျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ(NCGUB)အားလည်းကုလသမဂ္ဂတွင်ပိုမို၍ပြင်းထန်သည့်တင်ပြဆောင် ရွက်ချက်များပြုလုပ်ပေးရန်။
၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ(NCUB)၏လူထုတရပ်လုံးသို့အဆိုပြုတင်ပြချက် (Concept Paper)အရညွန့်ပေါင်းအစိုးရအားပိုမိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတွင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များ၊အတတ်ပညာရှင်များနှင့်ဥရောပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်လျှက်(၃)လအချိန်ပိုင်းအတွင်းအပြီးသတ်
ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ယင်းလူထုတရပ်လုံးသို့အဆိုပြုတင်ပြချက်တရပ် လုံးတွင်ပါဝင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဥရောပနိုင်ငံတခုချင်းစီမှမိမိတို့၏သဘော
ထားကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ(NCUB)သို့သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလ ပိုင်းဖြစ်သည့်မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍တင်ပြပေးရန်။
၄။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) ၏ Credentials Challenge ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍စစ်အာဏာရှင်နအဖအားမိမိတို့တတ်နိုင်သရွေ့နည်းမျိုးစုံဘက်ပေါင်းစုံဖြင့်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်
တရားဝင်တင်ပြဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ပြည်သူလူထု၏အချုပ်အချာအာဏာကိုအလွဲသုံးစွဲလုပ်ထားသည့်နအဖမှရရှိပြီးလျှင်၁၉၉၀ခုနှစ်အ ထွေထွေရွေးကေက်ပွဲကြီးမှပြည်သူများလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မဲပေး၍တင်မြှောက်လိုက်သည့်ပြည် ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရမှာလေ့လာသူများအဆင့်တွင်တက်ရောက်နေရ ခြင်းကိုထောက်ရှု၍
Credentials Challenge အစီအစဉ်အားဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အဖွဲ့ အစည်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်။
၅။ နိုဗယ်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍နိုဗယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မီတီသို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ လတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်ုငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သောရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည့်မြန်မာရဟန်းတော်များနှင့်
(Targeted Sanctions) ချမှတ်ပေးရေးနှင့်လူသားခြင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ခြင်း (Humanitarian Aid) ကိစ္စတွင်အောက်ခြေလူထုနှင့်နယ်စပ်ဒေသရှိတိုင်းရင်းသားများထံသို့ရောက်ရှိလျှက်တိကျပြတ်သားသောတာဝန်ယူမှုနှင့်
ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း ( Accountability & Transparency) ရှိမှသာစစ်အာဏာရှင်နအဖ၏ အလွဲသုံးစားပြုမှုကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရန်။
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ။ (Working Plan)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊လန်ဒန်မြို့တွင် ၁၃ ကြိမ်မြောက် FBE ညီလာခံအား ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၁၉၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ရက်နေ့တို့တွင်ကျင်းပရန်ပထမဦးစားပေးနှင့်ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ်ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်ကျင်းပရန်
ယင်းကာလအတွင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် FBE အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အားအောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်လိုက်သည်။
• ဦးနွယ်အောင် နှင့် မြန်မာ့ရေးရာအဖွဲ့မှ ၂ ဦး
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အတွက်မိမိတို့၏ကိုယ်စားလှယ်စါရင်းကို FBE အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ရက်သတ္တ ၄ ပတ်အတွင်းပို့ပေးရန်။
FBE ညီလာခံအတွက်အထွေထွေမတည်ရန်ပုံငွေကောက်ခံရာတွင်စုစုပေါင်းယူအက်စ်ဒေါ်လာ နှစ်ထောင်နှစ်ရာသုံးဆယ်ငါး
(၂၂၃၅) ရရှိလျှက်၎င်းမှပဏာမရရှိသောငွေသားဒေါ်လာခြောက်ရာ ရှစ်ဆယ်ငါး(၆၈၅) အား Woman of Burma Org. UK မှ ယာယီထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
FBE ညီလာခံ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများပိုမိုစောလျှင်တိကျစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များအချင်းချင်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ရေးအတွက် Skype Meeting ကိုဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်(တနင်္ဂနွေ)နေ့
ညနေ ၅ နာရီ (လန်ဒန်စံတော်ချိန်)မှစ၍အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီ (လန်ဒန်စံတော်ချိန်)တိုင်းတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
စစ်အာဏာရှင်နအဖ၏၂၀၁၀ ခုရွေးကောက်ပွဲအားဆန့်ကျင်သည့်ဆောင်ရွက်မှု (Anti-Election Campaign) ကိစ္စအားအပတ်စဉ် Skype Meeting တွင်အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
The Forum of Burmese in Europe (FBE) representsanet work of Burmese people across Europe and is advocating for democracy, social justice and human rights in Burma. The FBE strongly rejects the military dictatorial rule in Burma and has been working closely together with the democratic forces around the world.
Posted by LRDP at 5:50 AM 1 comments Links to this post
ဖဒိုမန်း၇ှာလာဖန်း ကျဆုံးခြင်းတစ်နှစ်ပြည့် ဂါရ၀အခမ်းအနား
ဖဒိုမန်းငြိမ်းဖြစ်ပါတယ် ဖဒိုမန်းငြိမ်းနဲ့ ဖဒိုမန်း၇ှာ ဟာ ပန်းတနော်သား ကျောင်းနေဖက် အနောက်ပိုးကရင်
များဖြစ်ကြပါတယ်။ကရင်ဗမာ ကိုဖ -ဆ-ပ-လ ကသွေးထိုးရန်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါ ကရင်ရွာ ဗမာ၇ွာတွေပျက်
ဆီးပြီး ဖဒိုမန်း၇ှာ တို့ မိသားစု လည်း ရန်လွတ်၇ာပြေးရာကနေ ဖဒိုမန်းရှာက ပြင်းထန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ရိုက်
ခတ်မှုဒဏ်တွေခံခဲ့ရ ပါတယ် ဖဒိုမန်းရှာ နဲ့ ဖဒိုမန်းငြိမ်း တို့ အထက်တန်းကျောင်းအတူတက်ခဲ့ပြီး
ဖဒိုမန်းရှာ က သမိုင်းမေဂျာနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကို ကရင့်တော်လှန်ရေးရဲ့တာဝန်ယူမှု နဲ့ ကျောင်းတက်
ခဲ့ပါတယ် ဦးသန့်အရေးအခင်းမှာလည်း ဖဒိုမန်းရှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့ ရပြီးပဲခူးရိုးမကိုပြန်လာခဲ့တယ်။။
၁၉၆၈ မှာ တရုတ်ဗမာ အထိကရုန်း ကို မ ဆ လ က ဖန်တီး ခဲ့ပါတယ် တရုတ်ကကြွေးကျော်ထား
တာကလည်း နိုင်ငံတစ်ကာတော်လှန်ရေးကိုအလုပ်အကျွေးပြုမယ် အဖိနှိပ်ခံတွေကိုကူညီမယ်။ဆိုတဲ့အခါ
၁၉၆၈ မှာ KNU ကိုကူညီဖို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထံသွားရောက်တောင်းဆို ခဲ့တယ် ။။
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ့လိုအင်အားကြီးနေချိန်မှာတောင်ပိုင်းမှာလည်း NDF က နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသြဇာ
ကြီးမားနေချိန်ဖြစ်တယ်။ မြောက်ပိုင်းကို ချီတက်ပြီးသွားရောက်ဆွေးနွေးမဲ့ တာဝန်ခံတွေထဲမှာ ဖဒိုမန်းရှာ
ဟာ (၄)ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်။ တကယ်တန်းဆွေးနွေးတဲ့အခါ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ပေါ်လစီနဲ့
KNU ပေါ်လစီကညှိမရခဲ့ပါဘူး ။ တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တာကဖယ်ဒရယ် တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးပါ
ကွန်မြူနစ် ကဒါတွေ နဲ့ ညှိမရခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့စစ်ရေးအရသဘောတူညီချက်တော့ရယူခဲ့တယ် ။။
ဒီလိုစစ်ရေးအရသဘောတူညီခဲ့ရပါ့ မလားဆိုပြီး ဖဒိုမန်းရှာ ကို ဗဟိုကော်မတီကနေ တပ်သားအဖြစ်ရာ
ထူးချခဲ့တဲ့အပြင် သေဒဏ်ပေးဖို့ ထိတောင်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ဒါကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်တော်လှန်ရေးမှာအကွေ့ 
အကောက်အတက်အကျ ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ် ဒီဒဏ်တွေကိုဖဒိုမန်းရှာ ခံခဲ့ရပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်
နဲ့ ရဲရဲတောက်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ပျောက်မသွားခဲ့ဘူး။ ဒါကတော့ ဖဒိုမန်းငြိမ်းပြောတဲ့ ဖဒိုမန်းရှာ
နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။။
NCUB ရဲ့ သဘာပတိ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် ဖဒိုမန်း၇ှာ ဟာ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်
ယုံကြည်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း နဲ့ ဖဒို ရဲ့ နိုင်ငံရေးကျော်ဖြတ်မှု တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။။
ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုခွန်မြင့်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ကိုခွန်မြင့်ထွန်းဟာ ပြည်ပကို မထွက်ခင်
ကတည်းက ဖဒိုမန်းရှာ နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဖယ်ဒရယ်အစိုးရဖွဲ့ ဖို့ ပြည်ပကို ထွက်လာတယ်ဆိုတာခွန်မြင့်
ထွန်း ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဖဒိုမန်း၇ှာရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမား ခဲ့တာမြင်သာပါလိမ့်မယ် ။။
ဒီကနေ့ အခမ်းအနား မှတြော့ကိုခွန်မြင့်ထွန်းက ဖဒိုမန်း၇ှာ ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် သမီးလေး ဇိုရာဖန်း အ
တွက် ဖဒိုမန်းရှာ ၇ဲ့ယုံကြည်မျော်လင့်ထားခဲ့ပုံ ဖဒိုရဲ့ခြေရာ ကိုနင်းမဲ့ သမီးလေးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို
ခွန်မြင့်ထွန်း၇ှင်းပြသွားသလို နှစ်(၆၀) ပြည့်ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ပွဲ ကိုသွားရောက်သူတိုင်းဟာလည်း
ဇိုရာဖန်း ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ထက်မြတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် မုချဧကန်ဖြစ်လာမှာကို ကျမ
အပါအ၀င်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလည်းသဘောပေါက် နားလည် ပြီးသားပါ ။။ ကိုခွန်မြင့်ထွန်းကဒီနေ့ 
ဒီလို ပြောခဲ့ပါတယ် ဖဒိုမန်းရှာဟာ သေဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး တော်လှန်ရေးရဲ့လမ်းခုလတ်မှာကျဆုံးသွား
Posted by LRDP at 11:12 PM0comments Links to this post
အာဇာနည် ဖရိုမန်းရှာလာဖန်း ကျဆုံးခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်(၁၄-၂-၀၉)
၁၄-၂-၂၀၀၈ တွင် စစ်အုပ်စု လက်ပါးစေ တို့ ၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရသော ဖထီး မန်းရှာ အား
နှမျောတသ ၀မ်းနည်းမိပါသည်။။ ယနေ့ ထိတိုင် ဖရိုမန်းရှာလာဖန်း ဆိုလျှင် ကရင့်အာဇာနည် ပင်မဟုတ် မြန်မာ
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဒီမိုကရေစီရရေး အတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်းအာဇာနည် ဟု မိမိတို့ ရင်တွင်း
၌ ကဗြည်း တင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။။ ဖထီးမန်းရှာ မျော်လင့်ခဲ့သော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်အား မဖြစ်မနေ
ရရှိအောင် မိမိတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွာပါမည်။ တိုင်ရင်းသားတန်းတူရေးဒီမိုကရေစီရေး ပန်းတိုင် သို့ သွားနိုင်
ရန် ဖထီး ၏ ဘ၀ နှင့် အသက် ကိုပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို နောင်လာနောက်သားများ အတုယူ နိုင်ရန် ဖထီး
မန်း၇ှာ ၏ ကျဆုံးခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်သည့် ဤ နေ့ အား လေးစားစွားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည် ။
Posted by LRDP at 3:50 PM0comments Links to this post
S - A -W ကျောင်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ 
မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ ကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူတရားတွေကို သိတက်လှတဲ့ စော ကျောင်း ဆရာဆရာမများက
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အင်မတန်မှဂုဏ်ယူလေးစားစရာကောင်းတဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ် ။။
ဒီအခန်းအနားမှာ ဗိုလ်ချုပ် မိန့်ခွန်းပြိုင်ပွဲ ။ပန်းချီပြိုင်ပွဲ။ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ ။ အားကစားပြိုင် ပွဲတွေကျင်းပ ခဲ့ကြ
ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားအပြင် ကျောင်းသားမိဘ ပရိတ်သတ် ၄၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။။
ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပညာရည်ချွန် ဆု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ် ။
ကလေးတွေ နဲ့ အတူတက်လာလာသူ အားလုံးကလည်း +++ ရာဇ၀င်အထ္ထုပတ္တိ လည်း၇ှိရမယ် ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်
သီချင်းကို သံပြိုင်အော်ဆိုလိုက်တာများ ကျမတို့ တော်လှန်ရေးအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကိုပိုမိုပြည့်ဝ စေပါတယ်။။
မျိုးဆက်သစ်တွေဗိုလ်ချုပ် သမိုင်း ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ ကျော်ဖြတ်လာမှု နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိတွေ ကိုသိရှိနားလည်အောင်အသိ
ပေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စော အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကို အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင် လေးစားဂုဏ်ယူပါကြောင်း တင်ပြ
ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းတွေ မွေးဖွါး နိုင်ပါစေ
Posted by LRDP at 10:21 PM0comments Links to this post
သူရဲကောင်းတစ်ဦးမွေးဖွါးပေးခဲ့တဲ့နေ့ (၁၃ - ၂ -၁၉၁၅)
မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ )
ကလေးတို့ ရေ လာလာလာ
ဒီနေ့ ဟာ ဘာနေ့ လဲ
မွေးနေ့ မှာတို့ ဆင်နွဲ ကလေးတိုင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲ
ကျေးဇူးကြီးတဲ့ တို့ ခေါင်းဆောင်
တို့ ဖခင်ဗိုလ်အောင်ဆန်းပြည်သူအတွက်သာသူကြိုးပမ်း ။။
(၁၉၉၆ မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ခြံဝင်း၌ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး
ဦးဝင်းထိန် ၏ သမီးငယ် ချစ်စုဝင်းထိန် မှသီဆိုခဲ့သည့် သံစဉ်နှင့်ကဗျာလေးဖြစ်သည် ။ ကဗျာဆရာ
ကြီး ဘဘဦးတင်မိုးေ၇းစပ်ခဲ့သည် ) လိုအပ်ချက်ရှိက မိမိ၏မပြည့်စုံမှုသာဖြစ်သည်)
ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် တို့ ဗိုလ်ချုပ်
ရိုးသားဖြောင့်မတ် သူ့ အမူအယာ
Posted by LRDP at 1:34 AM0comments Links to this post
ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်ဖို့ ရာ
(ပြည်ထောင်စုဖွါးပအို့ တိုင်းရင်းသားအမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခွန်မြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်)
သူကတော့ ဖယ်ဒရယ် စနစ် နဲ့ NCGUB က (၆) လ ပြည့်တဲ့အထိ (သူဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစ) မဆောင်ရွက်ဖူး
ဆိုရင် ၀န်ကြီးကနေနုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးပါ။။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဟုဆိုရာဝယ် ပြည်ထောင်စု ဖွါးတိုင်းရင်းသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံပင်ဖြစ်ပေသည်။။
မြန်မာနိုင်ငံအား ပြည်ထောင်စုဖွါးတိုင်းရင်းသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြည်ထောင်စု
ထိုနေ့ ကို အထိမ်းအမှတပြုကာပြည်ထောင်စုနေ့ ဟု သတ်မှတ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ထိုနေ့ ကဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၂)
ရက်နေ့ယခု (၆၂) နှစ် ကာလသို့ ပင်ရောက်ခဲ့ပေပြီ။သို့ သော် တိုင်းရင်းသားများတန်းတူညီတူအခွင့်အရေး
ကိုယ်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေ ရအောင်ဦးစီးဦးဆောင်ပေးမည့်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အား
တိုင်ရင်းသားလူနည်းစုများကိုကြီးစိုးချယ်လှယ် လိုသည့် ကိုလိုနီလက်ပါးစေ များ၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့
ရသည့်အခါ ကျံရစ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများ၏တာဝန်မယူနိုင်မှုအဆုံးအဖြတ်မှားမှုကြောင့်တိုင်ရင်းသား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ စေတနာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ဟာ လူများစုဖြစ်သော ဗမာတိုင်းရင်းသားများမှ လူနည်းစု
ဖြစ်သော ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ရခိုင် ရှမ်း တို့ အပေါ် အကိုကြီးမှညီငယ်များကိုလက်တွဲ
ညီညီဖြင့် ဗမာတစ်ကျပ် -ကရင်တစ်ကျပ် --ရှမ်းတစ်ကျပ် ဟု တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများ မျှတ အောင်
်ကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုသည်မှာလည်းဗမာတိုင်းရင်းသားများမှ တိုင်းရင်းသားငယ်များခွဲမထွက်ချင်
အောင် သူတို့ အခွင့်အလမ်းတွေအပြည့်အ၀ ပေးဖို့ လိုတယ် ခွဲထွက်မယ်လို့ ဖြစ်ခဲ့၇င်သူတို့ ဘာလို့ ခွဲထွက်ချင်
မလဲ တန်းတူသာတူညီမျှတဲ့အခွင့် ရရင် ဘယ်သူမှ ခွဲ ထွက်ချင်မှမဟုတ်ဘူး မရ လို့ သာဖြစ်မယ် ဒီတော့
ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက သဘောထားကြီးဖို့သာတူညီမျှ ရှိဖို့ တော့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စိတ်စေတနာ
သဘောထား ကျမတို့ လည်း သိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။။
အဲဒီ့မှာ ကျမတို့ ဗိုလ်ချုပ် ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေ ပိုကြီးထွားခဲ့တာကိုပြန်စန်းစစ်
မယ်ဆို ရင် မြေပြန့် တောင်ပေါ် နဲ့ ဒေသ အနေအထားတွေ အပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်
အရေးတွေ အင်မတန်မှ နည်းပါးခဲ့တယ် ။။ ရန်ကုန်မန္တလေးဆိုတဲ့ ဗမာအများစုရှိတဲ့မြို့ ကြီးတွေလောက်မှာသာ
ကောလိပ်တွေ တက္ကသိုလ်တွေ ဆေးရုံတွေ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစုစုတွေ တည်ဆောက် လာခဲ့တယ်။ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့
ဒေသတွေမှာကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အကြောင်းပြချက် ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ 
့ဖွံ့ ဖြိုးရေးကိုမလုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ဘူး ။။ကျမ ဗမာ ဖြစ်ပေမဲ့ သိတက်စအချိန်ထဲက ကျမတိုင်းရင်းသားငယ်တွေ
အပေါ်ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့တယ် ။။ အတိတ်သမိုင်းလေးတွေသိထားတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ တစ်တွေခံပြင်းခဲ့တာကို
စော်ဘွါး စေါဖျာ ဒူးဝါး ရမ်အုပ် စော်ကဲ စသည် နာမ များဖြင့်တထီးတနန်းစိုးစံခဲ့ကြသူတွေပါ အင်္ဂလိပ် က
ပြည်မ နဲ့ တောင်တန်းကိုခွဲခြားအုပ်ချုပ်ကာမှပြည်မ မှာတစ်ပေါင်းတည်းရှိတဲ့ ကရင် မွန် ဗမာ ရခိုင် တို့ ဟာ
တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပြီး တောင်ပေါ်နဲ့ ကရင်နီ ဒေသတွေကိုတော့ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ် ။။
စိုးရိမ်တာကြောင့် ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကို ရအောင်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ ။။ပင်လုံဟာသိတ်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ် တစ်စု
တစ်စည်းတည်းပေါင်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပင်လုံကိုကျမတို့ တန်ဖိုးထားရမှာပါ ။။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီခေတ် က စက္ကူဖြူ စာတန်း လို
ဘာလုပ်ရမည်နည်း ----- ဆိုသလိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ ပေါ့ တကယ်ဗိုလ်ချုပ်ကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တန်းတူ
အခွင့်အရေးပေးဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သလို ကျမတို့ တစ်တွေ ကျမတို့ တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးမှာခေါင်းဆောင်လို့ အမည်ခံ
ထားတဲ့ပုဂိုလ်များကရော တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမှုရစေမဲ့ ဖယ်ဒရယ် စနစ် ကိုဘာ့ကြောင့်များတွန့် ဆုတ်နေကြ
ပါသလဲ -- ဗမာတွေ တရားခံ လို့ ယိုးစွပ်ခံခဲ့ရတာမျိုးကိုသိတ်ပီတိဖြစ်နေရော့သလားကျမဖြင့်တော့၇ှက်မိပါတယ်။
ဒီနေ့ အခါသမယကိုပြည်ထောင်စုအလှအတုတွေနဲ့ စစ်အုပ်စုကခင်းကျင်း နေတာကိုကျမတို့ က ကဲ့ရဲ့ချုံ့ ချနေရုံနဲ့ 
စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုသားတွေ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုယ်စားမပြုပါဘူးကွာ ပြောနေရုံ
နဲ့NGO တွေကို ဒါတွေမတရားပါဘူးပြောပြနေရုံ နဲ့ ကျမတို့ ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာပြည်ထောင်စုစစ် ဘယ်နည်းနဲ့ မှဖြစ်
အဲဒီ့ခေတ်အဲဒီ့အခါကဗိုလ်ချုပ်ကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုးစာယုံကြည်ခဲ့သလို ကိုယ်တွေခေတ်မှာလည်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်ထားမှု ကို တိုးတက်လာအောင်မကြိုးစားနိုင်
ရင်တောင်မှ လျော့ပါးမသွားဖို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အထူးသဖြင့်ဗမာခေါင်းဆောင်ကြီးများ( အကြီးအကဲများ)
က ထူးကဲစွာသဘောထားပိုကြီးနိုင်ကာမှထူးကဲစွာကိုယ်ကျိုးပိုစွင့်ပေးကာမှထူးကဲစွာအနစ်နာခံပေးကာမှ ပြည်ထောင်စု
စစ်စစ်မူ နဲ့ကျမတို့ တိုင်းပြည် ကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်မှာပါ ။။
ဒီတော့အချိန်ရှိတုန်းပြင်သင့်တာတွေပြင် ဆင်သင့်တာတွေဆင်ဖို့ (ဆင်သင့် ဆိုတာဆင်ခြင်သင့်တာကိုဆိုလိုပါတယ်)
ပြည်ထောင်စုဖွါးဗမာတိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 9:50 AM 1 comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှ ယနေ့ ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ပညာပေး ဟောပြောပွဲ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်တွင် "စီးပွားရေး ဘာသာရပ်" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လူငယ်ပညာပေး ဟောပြောပွဲတရပ်အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမျိုးမြင့်က စီးပွားရေးဘာသာရပ်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ အခွန်ပြဿနာ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ကူညီထောက်ပံ့ ဖြေရှင်းမှုများ စသည်တို့ကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြသွားသည်။
ဟောပြောပွဲသို့ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ သခင်စိုးမြင့်၊ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း၊ဦးအုံးမောင်၊ဖျာပုံနီလုံဦး ဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့် တို့ အပါအဝင် လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း (၁၀၀) ဦးကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၄င်းဟောပြောပွဲတွင် ကိုမျိုးသန်းထက် (တိုင်းလူငယ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဝင်)မှ ဦးမျိုးမြင့် 
၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အားဖတ်ကြားပြပြီး ကိုအေးနှိင်(တိုင်းလုငယ်အကူအညီပေးရေး)မှ အခမ်းနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည်။ လူငယ်လူကြီးများမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နားထောင်ကြပြီး မေးခွန်းများကိုအပြန်အလှန်မေးခဲ့ ပါသည်
ဆွေးနွေးပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စပါးဈေးများ ကျဆင်းနေမှု၊ နာဂစ်နောက်ပိုင်း စပါးအထွက်နှုန်း ကျနေသဖြင့် လယ်သမားများ နစ်နာနေမှုအပေါ် စပါးများကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမျိုးမြင့်က ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အခွန်ဆောင် ပြည်သူများသည် မိမိတို့ ပေးဆောင်သည့် အခွန်များအား အစိုးရက မည်သည့်နေရာတွင် သုံးစွဲသည်ကို စိစစ်ပြီးမှ အခွန် ထမ်းဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူများသည် ဝင်ငွေတက်လာခြင်း မရှိသော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက အခွန်များသာ တိုးကောက်နေသဖြင့် "အခွန်ပိ" နေပြီး မတရားအခွန်ကောက်ခံနေခြင်းမှာ ဆတ်ကြေးကောက်သလိုသာဖြစ်နေကြောင်းနှင့် အကောက်ခံ၇သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏အခွင့်အရေးကို မိမိ တို့ ကာကွယ်ရန်လိုကြောင်းလည်း သူက ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယနေ့ ဟောပြောပွဲသည် ရန်ကုန်တိုင်း လူငယ် အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်လူငယ်များ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်သည့် လူငယ်ပညာပေးရေး အစီအစဉ်အရ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by LRDP at 5:51 AM0comments Links to this post
(၆၂) နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အား ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ တွင်ကျင်းပစဉ်
တိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေ၇ဲ့အမြတ်တနိုးဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့နေ့ မြတ်တွေကို တိုင်းတစ်ပါးမှကျင်းပ နေတာတွေ သိရမြင်ရတော့
ကျမ န အ ဖ ကိုပိုနာကျင် ပိုနာကျဉ်း ပါတယ် ကျမ တို့ သွေးချင်းတွေ အတက်ပညာအသိပညာတွေမြင့်မားလို့ မြင့်
မားဖို့ ဆိုတဲ့ ဘ၀ မျိုးနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ကြရတာမှမဟုတ်ပဲ ။။ ကိုယ်မြေကိုယ်ရေ ကိုယ့် မူလဘ၀လေးတွေကိုချန်ထား
ရစ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုယ်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးမှုမရတဲ့အခါ ရေကြည်ရာညမျက်နုရာကို သွားကြ ဘ၀သစ်တွေတည်ဆောက်
ကြရတယ် ။။ တော်ရာမှာနေရ ပျော်ရာမှာမနေရဆိုသလိုမျိုးပေါ့။။ တနေ့ ကျရင်တော့ သူတို့ တတွေအားလုံး ကိုယ်ပိုင်တဲ့
မြေ ဆီ ကိုယ့်မြေ အမိမြေ ပြန်လာနိုင်ကြမယ် လို့ ယုံကြည်မျော်လင့်ပါတယ် ။။ မွန်အမျိုးသားများအားလုံး ကိုယ်ကြမ္မာ
မင်းသူုဝဏ်၏ နှစ်တရာပြည့် အကြိုအထိမ်းအမှတ်စာဖတ်ဝိုင်းကို လူငယ်လူကြီး 54 ဦး
တက်ရောက်၍ သဘာပတိအဖြစ်ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း မှ ဆောင်ရွက်ပြီးဘိုအုန်းနှင့်
ဗျာပုံကြီးတို့ မှ သူတို့ သိသော ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်အကြောင်းကိုပြော၍ ရန်ကုန်တိုင်း
အကူညီပေးရေးမ ကိုအေးနီုင်မှဆရာကြီး၏ဘ၀ဖြစ်စဉ်အားဖတ်ကြား၍အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်
လူကြီး လူငယ်များမှ ဆရာကြီး၏စာပေများကိုတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။။
Posted by LRDP at 5:49 AM 1 comments Links to this post
ရဲဘော် မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဘလော့လေးကို အမြဲအားပေးတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဒီကနေ့ ညနေမှာ ကျမရဲ့ ဘလော့ ကို မသမာတဲ့သူတွေကဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ် ကျမ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ် ၀မ်းနည်းတာကတော့ တစ်နေ့ ကို စာဖတ်
ပရိတ်သတ် ရာကျော် ရဲ့ လာရောက်အားပေးခြင်းကို ဒီကနေ့ တစ်ရက်တာ ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတာကြောင့်ရယ်နောက်တစ်ခုက
စီဘောက်ထဲက ဘယ်လိုပင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဝေဖန်ရေးသားနေပါစေ သူတို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်တင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျမပို့ (စ်)တွေ
ကို ဖတ်ပြီး ရေးသားသွားတဲ့ စာလေးတွေပျောက်ဆုံးသွားလို့ ပါ ။ လူကို ချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေ ကဲ့ရဲ့သည်ဖြစ်စေ ကျမတင်ပြ
တဲ့စာတွေကို ဖတ်လိုက်ကြလို့ပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒီစီဘောက် က ပီတီဖြစ်ကိုဖြစ်လောက်ခဲ့တာပါ ။။ ဒါကတော့ ဆုံးရှုံးသွား လို့ 
၀မ်းနည်းတာပေါ့နော် ။။ ၀မ်းသာတယ် ဆိုတာကတော့ ကျမ၇ဲ့ရေးသားတင်ပြမှု ကျမ စိတ်ကလက်ခံနိုင်တာတွေကို ကူးယူ
တင်ပြခဲ့မှုတွေဟာ ရန်သူ ဒါမှမဟုတ် မသမာသူတွေ အပေါ် ဘယ်လောက် ထိခိုက်သွားသလဲဆိုရင် ကျမ ဘလော့ တစ်ခု
လုံးကိုဖျက်ပစ်ရလောက်အောင် သူတို့ ကိုခံစားချက်ပြင်းထန်သွားစေလို့ ပါ ။။ အဲလောက်သူတို့ စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ ကျမ
မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ ။ ဒါလည်းတော်လှန်ရေးစကားနဲ့ပြောရင် အောင်နိုင်ခြင်းတစ်ခုပါပဲ ။။
ရန်သူကစိတ်ဝင်စားလို့ လာတိုက်တာပဲ သူတို့ ထိခိုက်နစ်နာလို့ လာတိုက်တာပဲ ဒါလည်း ကျမရဲ့ တင်ပြမှုတွေရဲ့အကျိုးသက်
ရောက်မှုပေါ့နော် ။။ ကျမဘလော့လေးကို ဟခ် လိုက်ပြီဆိုတော့ ဘလော့ကာမောင်နှမတွေ ဘာကူညီရမလဲ ဘာလုပ်ပေးရ
မလဲ ဆိုပြီး ၀န်းရံလာတဲ့ ဒီညနေ ဟာ လည်း ကျမ ရဲ့စိတ်ကိုပီတိတွေ ထပ်တိုးပွါးစေပါတယ်။ကိုယ်ဘာသာစာတွေရေးတင်
နေတုန်းကတော့ကိုယ့်အာ၇ုံနဲ့ကိုယ် ဘလော့လုပ်တာမိတ်ဆွေရင်း တွေဒီလောက်တိုးလာမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ ခုပဲကြည့်လေဘလော့ကာညီမလေး တစ်ယောက်ဆို ညတွင်းချင်းပဲ ကျမ ပို့ (စ်) ချက်ချင်းတင်နိုင်ဖို့ ဒီဘလော့အသစ်လေး
ကို သူမပဲ တည်ဆောက်ပေးလိုက်တယ်။ အခက်အခဲ နဲ့ ကြုံလာအောင် ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့သူများကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါ့။
မဟုတ်ဘူးလား၇ှင် ။။ လောကမှာအဆိုးဖက်ကပါရမီဖြည့်တဲ့ ရာဇ၀င်တွေကလည်းရှိခဲ့ပေတာကိုး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမက ကျမ
လျောက်တဲ့လမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လျောက်မှာပါ ကျမ ဘယ်သူ့မှဘာကိုမှမကြောက်ပါဘူး ခုလို ကြွက်မနိုင်ကျီမီးနဲ့ရှို့ တဲ့အဟိတ်
လူတွေကိုပိုမကြောက်ပါဘူး သနားမိတာပါ သူတို့ ဟာကျမကို ပြစ်တင်ပြောဖို့လုပ်ဇာတ်တွေနဲ့ အပုတ်ချလာတဲ့အခါစာဖတ်
ပရိတ်သတ်အစစ်တွေက ကျမအပေါ်ပိုယုံကြည်ကိုးစားလာကြတာပါပဲ ။။ ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အဆုံး ဘလော့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ကြ
တာ ကျမရဲ့အောင်မြင်မှု ထင်ပေါ်ကျော်ဇော်မှုကိုပိုရအောင် တွန်းတိုက်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ ။။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ ကျမ
မေအိခင် ကတော့ ပန်းပန်လျှက်ပါပဲ ။။။။
Posted by LRDP at 8:57 AM 13 comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:40 AM3comments Links to this post